किन मनाईन्छ होली पर्व ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
किन मनाईन्छ होली पर्व ?
काठमाडौं । होली हिन्दू संस्कृतिमा प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात होली पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ । होली नेपाल, भारत तथा अन्य राष्ट्रमा रहेका हिन्दूहरूको एउटा महत्वपूर्ण चाड हो । यो चाड वसन्त ऋतुमा फागुनको महिनामा मनाइन्छ । होली रङ्गहरूको चाड हो । होलीको दिन मानिसहरूले एक अर्कामाथि विभिन्न प्रकारका रङ्गहरू हालेर एक अर्कालाई रङ्गिन बनाउछन् । होली पर्व मनाउनुको एउटा कारण र इतिहास छ ।
काठमाडौँ, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ । नयाँ […]
सवारी साधनको भाडा घटाउन नेवि संघको माग
माघ ६। काठमाडौँ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेकाले सवारी साधनको पनि भाडादर घटाउन […]
खेतमा काम गर्न हिडेकी महिलामाथि बलात्कार
मंसिर ८ ।रौतहट, रौतहटको बैरिया -५ का २७ वर्षीय शेख मोविनले एक महिलालाई बलात्कार गरेका छन । लालबकैया नदीको […]
रूकुम । आठबीसकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक कार्यक्रममा मासु प्रतिबन्ध लगाएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक कार्यक्रम […]
प्रदेश समानुपातिक बाँडफाँट: एमाले नै पहिलो दल,कसले कटायो थ्रेसहोल्ड ?
काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन हप्तापछि निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ दलहरुले […]